Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal lidka maraakiibta ah - BBC News Somali
Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal lidka maraakiibta ah
Image caption Kuuriyada Waqooyi ayaa 2012-kii soo bandhigtay gantaallo lidka maraakiibta ah
Kuuriyada Waqooyi ayaa xeebteeda bariga waxa ay ka ridday dhowr gantaal oo nooca lidka maraakiibta ah, waxaa sidaasi sheegay milateriga Kuuriyada Koonfureed.
Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in hubka subaxa Khamiista laga riday meel u dhaw magaalada Wonsan, uu u muuqday mid ay ridadiisu gaaban tahay oo ah nooca lidka maraakiibta.
Gantaaladu waxa ay jareen qiyaastii 200km ka hor inta aanay ku dhicin biyaha badda.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkan si joogta ah waxa ay u tijaabisay gantaallada ridada dheer, tijaabooyinkaas oo dhammaantood aanan lagu guulaysan balse xadgudub ku ahaa cunaqabateynta Qaramada Midoobay, ayaa waxa ay sare u qaadeen walaaca caalamiga ah ee arrintan laga qabo.
Khubarada ayaa waxa ay ka cabsi qabaan in tijaabooyinkaasi ay tilmaan u yihiin horumarka ay Pyongyang ku gaarayso yoolkeeda ee ay ku samaysanayso gantaalo xambaari kara madaxyo nukliyeer ah.
Sikastaba ha ahaatee, tijaabadan ugu dambaysay ayaanan xadgud ku ahayn qaraarada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ka dhanka ah Waqooyiga, maadaama qaraaradaasi ay mamnuucayaan oo kaliya tijaabooyinka gantaalada ridada dheer, sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap.
Afahayeenka milateriga Kuuriyada Koonfureed Roh Jae-cheon ayaa sheegay in tijaabadan ugu dambaysay ay muujinayso in Waqooyigu "ay u badan tahay inuu doonayo inuu muujiyo awooddiisa uu ku bartilmaameedsan karo maraakiibta dagaal ee waa weyn" kaddib dhoolatuskii milateri ee ay ka qeyb qaateen maraakiibta xambaarta diyaaradaha ee Mareykanka iyo ciidammada Kuuriyada Koonfureed.